Onye nchịkwa netwọk - Motadata
Maka ndị nchịkwa netwọkụ
Nweta echiche zuru oke iji dozie nsogbu ọsọ ọsọ
Kwado ndị njikwa netwọkụ gị aka ijide ihe ọ bụla akụrụngwa IT ọgbara ọhụrụ na-eweta
Ihe ịma aka nke Ndị nchịkwa netwọk
Ndị na-ahụ maka netwọkụ na-eji ụbọchị ha na-agbalị idozi nsogbu njikọ netwọkụ na idowe netwọkụ ahụ. Ha ga-ejikwa nchekwa nke ozi ụlọ ọrụ ma ga-ejigide njikọ a pụrụ ịdabere na ya maka ndị ọrụ. Enwere ọtụtụ nsogbu ndị na-ahụ maka netwọkụ na-eche ihu, dị ka ịmara ihe ngwaọrụ dị na netwọkụ ahụ, nyochaa okporo ụzọ iji gbochie mmebi nchekwa na ijikwa ohere onye ọrụ na netwọk na usoro dị iche iche maka ebumnuche dị iche iche.
kwenyere na akpaaka na-arụ ọrụ dị mkpa n'ịkwalite oge nke ngwa ha.
Motadata AIOps na-enye ndị na-ahụ maka netwọkụ ikike ka ha na-enyocha arụmọrụ nke ngwa, chọpụta ihe adịghị mma, mekọrịta ihe omume, wee nweta akpaaka oche ọrụ.
Ngwọta Motadata AIops maka ndị nchịkwa netwọk
Jikọta mkpokọta data, njikwa data, na nyocha amụma maka ime mkpebi nwere mmetụta
Ịchekwa netwọkụ a na-abụkarị ọrụ siri ike maka otu onye nchịkwa netwọkụ. Site na mwakpo malware ọhụrụ yana mmebi nchekwa dị elu kwa ụbọchị, iji usoro nlekota ọdịnala chekwaa netwọkụ ahụ siri ike.
Na mgbakwunye, netwọkụ ejirila ngwaọrụ IoT, igwe ojii mebere, arịa na ọnụ ọgụgụ na-abawanye ụba nke ngwaọrụ BYOD adịla mgbagwoju anya.
Site na Motadata Network Observer, ndị na-ahụ maka netwọkụ nwere ike nyochaa netwọkụ niile na ihe omume ya ozugbo, na-edobe onye nchịkwa anya na anomalies.
Nyochaa na mmezi
Na ọnụ ọgụgụ na-abịa mgbagwoju anya na ijikwa nnukwu data.
Site na Motadata AIOps, ndị otu netwọkụ nwere ike ikpokọta data sitere na isi mmalite dị iche iche wee mee mmemme mmemme iji chọpụta okwu nwere ike imetụta ndị ọrụ njedebe yana n'ikpeazụ azụmaahịa.
Enwere ike ịnakọta data na-akpaghị aka iji mee ka nke a bụrụ usoro na-aga n'ihu.
Okwu ọ bụla dị na netwọk ga-edozirịrị n'usoro maka mkpebi ngwa ngwa. Motadata AIOps nwere akpaaka oche ọrụ nwere ike ịtụgharị ọkwa ka ọ bụrụ tiketi, nke enwere ike ijikwa iche iche site na iji sistemụ njikwa ihe omume ITIL jikọtara ọnụ.
Ewezuga nke a, enwere ike iji akpaaka oche ọrụ jikwaa ohere nke ndị ọrụ na sistemụ dị iche iche na akụrụngwa IT.
Uru maka Ndị nchịkwa netwọk
Motadata na-enye ndị na-ahụ maka netwọkụ ohere AI na ijikwa mgbagwoju anya nke akụrụngwa IT ọgbara ọhụrụ.
Ogologo oge abawanyela
Ihe ngwọta AI-Driven na-eme ka ndị otu Network Admin mara maka ọdịda nwere ike ịda. Ọ na-enye nghọta site na ụkpụrụ ma chọpụta ihe adịghị mma, na-echekwa oge, ọnụ ahịa na mmebi ụlọ ọrụ ahụ.
Iji bandwit ka mma
Bandwidth na-ejikarị eme ihe karịa, mgbe ụfọdụ anaghị eji ya eme ihe. Na-echekwa nche nke ọma, ndị na-ahụ maka netwọkụ nwere ike ịchọpụta mkpọmkpọ ebe yana itinye bandwidth ụzọ.
Nchọpụta akpaaka dị elu
N'ọtụtụ ngwaọrụ dị na netwọkụ, ijikọ na nlekota ha nwere ike ịbụ ọrụ siri ike. Site na nchọta akpaaka dị elu, ihe ngwọta na-achọpụta ngwaọrụ niile wee lelee ha n'enweghị nsogbu ọ bụla.